Ikhaya / Blog / I-Apex Coin Generator: Fumana ii-coin zee-Apex kunye neeTokens
Iimpawu zeNtshukumo ngowona midlalo uthandwayo apha. Ukudlala umdlalo, uya kudinga ii-Apex Coins ukuze uphucule ngokufanelekileyo kwimidlalo ejolise kumdlalo. Kulabo abangaziyo, i-Apex Coin yimali yokuqala yomdlalo. Iluncedo kakhulu ekuphuculeni ukusebenza kwabalinganiswa bakho kuba uphuculo oluthile lunokukunceda ulwe ngcono kunesiqhelo kule ndoda yokugqibela ilindileyo yomdlalo.
Kuba wonke umdlali ufuna ii-Apex zemali kunye neeTokens, we ufumanise ukuba I-apex Coin generator ezinokubonelela ngeeNgqekembe ze-Apex kunye neeTokeni ngaphandle kweendleko. Ewe kunjalo, ngokuqinisekileyo kunokwenzeka ukuba ugaye indlela yakho eya empumelelweni kwi-Apex Legends ngaphandle kokuthenga ii-Apex Coins kunye neToken yemali yokwenyani yelizwe. Kodwa emva koko, kuyakuthatha ixesha elininzi kunye nomzamo. Ke, unokukhetha phakathi kokusebenzisa i-generator okanye ukuchitha iiyure ze-hellish ukuvula uphuculo oluthile ngexesha lokudlala.
Ukuba wenze isigqibo sobulumko sokusebenzisa i-generator esemthethweni, sinokukunceda ngamanyathelo okusebenzisa i I-apex Coin generator ngoku nangoku. Sebenzisa i-generator, kufuneka ulandele nje la manyathelo anikezwe ngezantsi:
-Intern Apex Legends yegama lomsebenzisi
-Khetha iqonga oza kube udlala kulo umdlalo
Faka ixabiso leengqekembe ozifunayo
-Cofa iqhosha lokuqinisekisa
Ewe kunjalo, qinisekisa ukuphinda ujonge ulwazi ngaphambi kokuba ucofe iqhosha lokuqinisekisa ukuba awuphulukani nobutyebi obuxabisekileyo obunikelwe bona. Ukuba ungenise ulwazi olungalunganga ngempazamo, phinda ufake ulwazi oluchanekileyo. Okokugqibela, hit iqhosha lokuqinisekisa.
Nje ukuba ucofe iqhosha lokuqinisekisa, umvelisi uya kuqalisa ukulungisa ulwazi lwakho. Ngokusisiseko, iya kuqala ukuvelisa inani eliceliweyo leengqekembe. Ngamaxesha athile, unokubona iwindow pop-up, apho uya kucelwa ukuba ukhethe, 'andinguye Robot' wokujonga. Njengoko sele uyazi ngoku, iiwebhusayithi ezininzi zolu hlobo zinolu luhlu lokhuseleko kwindawo yazo ukuthintela i-bots ekusebenziseni kakubi i-generator.
Ingcebiso ebalulekileyo yokuLandela: Ungalibali ukuvuselela iakhawunti yakho ukuba awuboni isixa-mali esiceliweyo kwiakhawunti ye-Apex Legends. Iingqekembe zakho ziya kuba lapho uthe wazihlaziya.
Kutheni usebenzisa le Generator ngaphezu kwabanye?
Emva kovavanyo oluqatha, sayifumana I-apex Coin generator ukuba bhetele kunokuphumla. Umvelisi kwingxoxo awasebenzi nje kuphela, kodwa uyithembekile i-100%. Ngcono nangoku, akusayi kufuneka uhlawule nantoni na ukuze usebenzise le generator Iingqekembe zasimahla ze-Apex Legends. Kwakhona, akuyi kufuneka ukhuphele naziphi na izinto. Akukho kufakwa okanye ukugqobhoza ejele kuyafuneka ngokunjalo. Konke okwenzayo kukulandela imiyalelo enikezwe ngaphambili ukuze ufumane ii-Apex Coins ezixabisekileyo phantse kwangoko, ezinokukunceda ufumane umda ophezulu kumdlalo we-Apex Legends ngendlela engazange ibekho ngaphambili. Ngokukrakra, oku I-apex Legends Coin generator banokuhlazisa bonke abanye abavelisi.
Gcina ukhumbula ukuba zininzi izinto ezivelisa ubuqhetseba phaya ezorhwebo namhlanje. Ezo ezingezizo inokosulela ikhompyuter yakho nge-Trojan kunye neentsholongwane. Okubi nangakumbi, banokufumana i-akhawunti yakho yokudlala ivinjelwe ngenxa yokuba bahlala bengasebenzisi into yokhuselo yase-antiban ukukhusela i-akhawunti yakho kwisisongelo sesibhengezo. Ulwazi lwakho lobuqu lunokuba semngciphekweni. Ke ngoko, umntu kufuneka alumke ngokwenene xa esebenzisa i-generator yolu hlobo. Ngovuyo ngokwaneleyo, senze konke okusisiseko ngaphambi kokuzinza koku I-apex Legends Coin generator, kukugcina ixesha elininzi kunye nengxaki kwinkqubo. Oku Apex Coin Generator Ngenene ukhona ukuphucula amava akho emidlalo. Ke, ulindele ntoni? Sebenzisa ngokupheleleyo i-apex generator ukuze ufumane okungakumbi kumdlalo we-Apex Legends. Ewe kunjalo, kutheni ubhatala ngemali yokwenene xa unokufumana Iingqekembe zasimahla ze-Apex Legends ngokusebenzisa le generator? Njengoko kuchaziwe ngaphambili, le generator ye-Apex Coins iye yajamelana novavanyo lwexesha. Incede uninzi lwabadlali beqonga phaya, kubandakanya nathi, ngaphandle kokudala nayiphi na ingxelo kwiakhawunti yethu ye-Apex Legends. Zonke iakhawunti ezisetyenziselwa ukuvavanya le jenreyitha zisebenza ngokupheleleyo ngexesha lokubhalwa. Ke ngoko, sincoma le generator ye-Apex Coins ngaphandle kokubhuka. Ngokukrakra, esi sixhobo sinokukusindisa amakhulu eedola. Ngoku unendlela yokufumana iiMali ze-Apex zasimahla, ngoko ke sebenzisa ithuba elipheleleyo lokunyuka indlela yakho yokuphumelela kwi-Apex Legends ngaphandle kobunzima.
Ndiyayithanda le webhusayithi!
Ndiyayithanda, oku kupholile
Le yeyona nyani! Ekugqibeleni !!!